Ndị na-emepụta VEST - China Vires na-eweta & Factory
3 NA 1 JACKET
AKW JackKWỌ AH SORF
EGO KA MMA
Jaketị ajị anụ
ỌR DR FASHION
Mpempe akwụkwọ Set
Mpempe igwe mpụga nke ikuku anaghị agba ...
nwoke Yoga uwe agbakwunyere Con ...
Kacha ọhụrụ omenala egwuregwu tshirt ...
100% mmiri mmiri Polyamide s ...
High Quality Omenala Men Sof ...
Factorylọ ọrụ eji emepụta akwa akwa akwa akwa nke ụmụ nwoke
Anyị akwa-nwoke Mens vest cotton bụ dị mfe, dị mma na V-neck na-enye gị ohere iku ume. Okwesiri maka oge mgbụsị akwụkwọ, uwe elu na nkedo dị n'ime. Ọ nwere ike rụọ ọrụ iji nọgide na-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na ịzụta n'ọtụtụ buru ibu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ozugbo iji nweta ọnụahịa kacha mma.
Enwere ike idozi ire ere, igwe mụta ngwa agha maka ọkụ na nkasi obi
Uwe a na-eji ajị anụ bụ ụmụ nwoke bụ ụdị dị mfe, ị ga-achọ uwe na akwa uwe mgbụsị akwụkwọ. Ihe ịkpụkpụ ya mgbe nile na-eji akwa dị nro na-enye nkasi obi na-adịte aka, na-eme ka ahụ ruo gị ala n'oge ụbọchị mgbụsị akwụkwọ ndị ahụ na olu akwa na-enye nchebe ọzọ
100% Polyamide na-ekpuchi mmiri maka uwe maka ụmụ nwoke
Ihe ngosi anyị dị nro dị mma maka ọnọdụ ihu igwe niile. Ngwá mmiri ski, ihe na-ekpo ọkụ n’elu ụgbọ mmiri na obodo gburugburu ụwa. Ọdịdị egwuregwu, ọkụ na nchedo onye ọ bụla nwere jaket shei dị nro nwere ike ịhụ ọdịdị nke akwa shei dị nro. Enweghị nsogbu ọ bụla na mmiri ọgbụgbọ na ikuku. Ma ọ bụ na mkpọda, na nzọ ụkwụ ma ọ bụ na ebe kachasị amasị gị, jaket a nwere ike ijikwa ya.